Otutu eji osisi
Ndị mmadụ ji ajị anụ eme ihe kemgbe ọtụtụ puku afọ. Dị ka Bill Bryson si kwuo n'akwụkwọ ya 'At Home': ' Ruo taa, a na-eji ihe ka ọtụtụ n'ime ajị anụ emepụtara maka uwe. Mana eji kwa ya ka mu ...
Kedụ ka e si eme akpụkpọ ụkwụ SHEEPSKIN?
Akpụkpọ ụkwụ atụrụ dị ka enwere ike ịghọta site na aha ahụ bụ akpụkpọ ụkwụ akpụkpọ anụ mepụtara site na atụrụ. Akpụkpọ ụkwụ ndị a bụ akpụkpọ ụkwụ akpụkpọ ụkwụ unisex nke ejiri ejima na-eche ihu atụrụ na ajị anụ na akụkụ dị n'ime yana elu nke dị larịị yana syntheti ...